Khashkhashaad: Maxay uga dhigan tahay Ololahaaga Suuqgeynta Dijital ah? | Martech Zone
Khashkhashaad: Maxay uga dhigan tahay Ololahaaga Suuqgeynta Dijital ah?
Isniin, Disembar 5, 2016 Caroline Black
Sannadka soo socda ayaa loo qoondeeyay inuu noqdo sanad xiiso u leh suuq-geynta dhijitaalka, iyadoo aan la koobi karin isbeddelo hor-u-socod ah oo ku saabsan muuqaalka internetka. Internetka Waxyaabaha iyo u dhaqaaqista dhanka xaqiiqda dalwaddu waxay keeneysaa awood cusub oo suuqgeynta internetka ah, iyo hal-abuurnimada cusub ee softiweerku waxay si joogto ah u qaadanayaan masraxa xarunta. Nasiib darrose, si kastaba ha noqotee, dhammaantood horumarradan ma ahan kuwo wanaagsan.
Kuweena ka shaqeeya khadka tooska ah waxay si joogto ah ula kulmaan halista dambiilayaasha, kuwaas oo si hagar la’aan ah u hela habab cusub oo ay ku galaan kombuyuutarradeena oo ay u geystaan ​​qasaaro. Burcadda internetka waxay u adeegsadaan internetka si ay u fuliyaan xatooyada aqoonsiga oo ay u abuuraan khayaano casri ah oo sii kordheysa. Qaar ka mid ah soo noqnoqoshada khayaanada, sida ransomware, ayaa hadda leh awooda qufulka kombiyuutarkaaga oo dhan - waa musiibo haddii aad leedahay waqtiyo muhiim ah iyo xog aad u qiimo badan oo halkaa ku jirta. Ugu dambeyntiina, suurtagalnimada dhibaatooyinkan oo keenaya khasaaro maaliyadeed oo baaxad leh ama gebi ahaanba la xiro shirkadaha ayaa hadda ka sarreeya sidii ay waligeed ahayd.
Iyada oo ay jiraan hanjabaado badan oo baaxad leh oo ku dhuumaaleysanaya qoto dheer webka, way fududaan kartaa in la iska indhatiro infekshin u muuqda mid aan dhib lahayn, sida qayb ka mid ah xumaanta - sax? Khalad Xitaa noocyada ugu fudud ee khayaanada xun waxay saameyn xun ku yeelan karaan ololahaaga suuqgeynta dijitaalka ah, marka waa lama huraan inaad si fiican u baraneyso dhammaan halista iyo daaweynta.
Waa Maxay Khashkhashaad?
Malvertising - ama xayeysiinta xaasidnimada ah - waa fikrad is-sharaxaad badan. Waxay u egtahay qaabka xayeysiiska caadiga ah ee internetka laakiin, markii la gujiyo, waxay kuu gudbin doontaa bogga cudurka qaba. Tani waxay sababi kartaa musuqmaasuqa faylasha ama xitaa afduubka mashiinkaaga.
2009 arkay infekshan ku jira bogga internetka ee NY Times Isku soo dejiso kumbuyuutarrada booqda oo samee waxa loo yaqaan 'Bahama botnet'; shabakad mashiinno loo isticmaalo in lagu sameeyo khayaanada ballaaran ee khadka tooska ah.
In kasta oo qaar badani aaminsan yihiin been-abuurka inay u muuqato wax ku filan oo lagu ogaan karo - maadaama ay si joogto ah u qaadato qaab-ka-soo-baxa meelaha lulataaye ama emayl iib ah - xaqiiqadu waxay tahay in kharibayaasha xagjirka ah ay sii kordhayaan khiyaanooyinka.
Maanta, waxay adeegsadaan wadiiqooyin xayeysiin xalaal ah waxayna abuuraan xayeysiisyo la aamini karo oo badanaa boggu xitaa uusan ka warqabin inuu cudurka qabo. Xaqiiqdii, dambiileyaasha internetka ayaa hadda noqday kuwa hormood ka ah shaqadooda oo xitaa waxay bartaan cilmu-nafsiga aadanaha si loo aqoonsado habka ugu wanaagsan ee lagu khiyaaneeyo dhibbanayaasha oo loogu hoos dhaco radar-ka.
Horumarkaan nasiib darrada ahi wuxuu ka dhigan yahay in ololahaaga suuq-geynta dijitaalka ahi xambaarsan yahay virus hadda, adigoon xitaa ogaan. Sawir kan:
Shirkad u muuqata inay sharci tahay ayaa kuu soo socota waxayna ku weydiineysaa haddii ay xayeysiin ku sameyn karaan boggaaga internetka. Waxay bixiyaan lacag bixin wanaagsan mana lihid sabab aad uga shakisid, sidaa darteed waad aqbashaa. Waxaadan ogayn, ayaa ah in xayeysiintan ay u direyso saami qeyb ka mid ah dadka ku soo booqda goobta cudurka uu ku dhacayo kuna qasbayso inay qaadaan fayras ayagoon xitaa ogeyn. Waxay ogaan doonaan in kombuyuutarkoodu uu cudurka ku dhacay, laakiin qaarna xitaa kama shakisan yihiin in dhibaatada lagu bilaabay adoo adeegsanaya xayeysiiskaaga, taasoo la micno ah in websaydhkaagu uu sii wadi doono inuu dadka sii qaadsiiyo illaa uu qof ka mid ah calaamadda dhibaatada.
Tani maahan xaalad aad rabto inaad kujirto.
Malvertising ayaa soo socotay Jidka kore ee qurxoon oo cad tan iyo markii ugu horaysay ee la arkay sanadkii 2007 markii u nuglaanta Adobe Flash Player ay u ogalaatay jabsadayaasha inay jabsadaan qolalka ay leeyihiin boggaga sida Myspace iyo Rhapsody Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray dhowr qodob oo muhiim ah inta uu nool yahay oo naga caawin kara inaan fahamno sida ay u horumartay.
Sannadkii 2010, Isbahaysiga Isbahaysiga ee 'Online Trust Alliance' waxay ogaadeen in 3500 goobood ay wateen foomkan Malware. Intaas ka dib, guddi-howleed warshadeed ayaa loo sameeyay si ay isugu dayaan inay ula dagaallamaan halista.
2013 waxay aragtay Yahoo in lagu dhuftay olole ba'an oo musuqmaasuq ah oo la yimid mid ka mid ah qaababkii ugu horreeyay ee lagu soo sheegay ransomware.
Cyphort, oo ah shirkad xagga amniga ka shaqeysa ayaa sheegata in xumaan-xumadu ay aragtay daanka daadinaya 325 boqolkiiba oo kor u kacay 2014-kii.
In 2015, this computer computer jahwareer jabsaday mobile, sida McAfee aqoonsaday in ay warbixin sanadle ah.
Maanta, xumaan-xumadu waa qayb ka mid ah nolosha dhijitaalka ah sida xayeysiinta lafteeda. Taas oo macnaheedu yahay, sida suuqgeyn khadka tooska ah, way ka muhiimsan tahay sidii hore si aad naftaada uga dhaadhiciso halista soo socota.
Sidee ayey u Tahay Khatar?
Nasiib darrose, sidii suuq ahaan iyo isticmaale kumbuyuutar shaqsiyeed, khatartaada ka-ganacsiga xun waa laba laab. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaanu jirin wax xayeysiis ah oo xayeysiis ah oo ku saabsan habka ay u socdaan ololahaaga suuq-geynta. Badanaa, xayeysiinta dhinac saddexaad waa darawal dhaqaale oo muhiim ah oo ka dambeeya dhiirrigelinta khadka tooska ah iyo, qof jecel shaqadiisa, tani macnaheedu waa helitaanka tartamayaasha ugu sarreeya si ay u buuxiyaan boos kasta oo xayeysiis ah.
Tan awgeed, waxaa muhiim ah in laga feejignaado halista bixinta boosaska xayeysiinta iyadoo la adeegsanayo waqtiga-qandaraaska; daraasaddan waxay bixisaa aragti faahfaahsan oo ku saabsan arrinta suurtagalka ah xeeladdan soo saarista dakhliga internetka. Asal ahaan, waxay sheeganeysaa in waqtiga dhabta ah ee xaraashka ah - xaraashka xayeysiiskaaga xayeysiinta - ay la socoto khatar dheeraad ah. Waxay muujineysaa tan sababtoo ah xayeysiisyada la iibsaday waxaa lagu martigeliyay server-yada saddexaad, iyadoo la tirtirayo wax kasta oo xakameyn ah oo aad ku yeelan laheyd waxa ku jira.
Sidoo kale, suuqgeyn ahaan khadka tooska ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad iska ilaaliso qaadista fayras naftaada. Xitaa haddii aad haysato joogitaan nadiif ah oo khadka tooska ah ah, habdhaqanka amniga shakhsi ahaaneed ee jilicsan ayaa u badan inay kugu kalifaan inaad lumiso xogta shaqada ee qiimaha leh. Markasta oo laga hadlayo amniga internetka, mudnaanta ugu sareysa waa inay ahaato caadooyinkaaga. Waxaan ku dabooli doonaa sida loo maareeyo tan si dheeri ah boostada.
Malvertising & Sumcad
Markii laga hadlayo khatarta ka imaan karta xumaanta, qaar badan oo ka mid ah waxay fahmi waayaan sababta ay muhiim u tahay - hubaal waxaad si fudud uga saari kartaa xayeysiiska cudurka qaba, dhibaataduna way dhammaatay?
Nasiib darrose, taasi si joogto ah maahan kiiska. Isticmaalayaasha internetka si aan caadi aheyn ayey u kala geddisan yihiin, maadaama khatarta haakiska ay soo shaac baxeyso, waxay sameyn doonaan wax walba oo karaankooda ah si ay uga fogaadaan dhibbane. Tani waxay ka dhigan tahay waxa aan ugu yeeri karno 'xaalada ugu fiican' - tusaale ahaan soo ifbaxa cad oo xun oo muuqda oo la saarayo ka hor inta aysan u helin fursad ay waxyeello u geysato - weli waxaa jira suurtagalnimada in ololahaaga suuq-geynta lagu mariyo si aan macquul ahayn.
Sumcadda internetka ayaa sii kordheysa mid muhiim ah, isticmaaleyaashuna waxay rabaan inay dareemaan inay yaqaanaan oo ay aaminaan astaamaha ay lacagtooda siiyaan. Xitaa calaamadda ugu yar ee dhibaatada suurtagalka ah waxayna heli doonaan meel kale oo ay ku maalgashadaan waqtigooda iyo lacagtooda.
Sida Loogu Hesho Naftaada
Astaamaha injineer kasta oo amniga wanaagsan ayaa ah: 'Amnigu ma aha wax soo saar, laakiin waa geedi socod.' Waxay ka badan tahay naqshadeynta sirta adag ee nidaamka; waxay dejineysaa nidaamka oo dhan sida in dhammaan tallaabooyinka amniga, oo ay ku jiraan cryptography, ay wada shaqeeyaan. Bruce schneier, Hogaamiyaha Cryptographer iyo Khabiirka Amniga Kumbuyuutarka
In kasta oo si gaar ah loo adeegsado wax ka qabashada wax isdabamarinta, dareenka ayaa wali ah mid khuseeya. Waa wax aan macquul aheyn in la dejiyo nidaam si joogto ah u bixin doona difaac buuxa. Xitaa haddii aad isticmaasho teknolojiyadda ugu fiican, weli waxaa jira khiyaanooyin bartilmaameedsanaya adeegsadaha halkii kombuyuutarka. Xaqiiqda, waxaad u baahan tahay waa hab maamuuska amniga, kuwaas oo dib loo eego lana cusbooneysiiyo si joogto ah, halkii laga ahaan lahaa nidaam keli ah.
Tallaabooyinkan soo socda dhammaantood waa kuwo muhiim u ah inay kaa caawiyaan wax ka qabashada dhibaatada sii kordheysa ee kharibaadda.
Ka Badbaadinta naftaada xumaanta
Ku rakib Suite Sugan oo Dhamaystiran. Waxaa jira baakado badan oo nabadgelyo oo weyn oo la heli karo. Nidaamyadani waxay ku siin doonaan baaritaanno joogto ah mashiinkaaga waxayna bixin doonaan safka ugu horreeya ee difaaca haddii aad fayras ku dhacdo.
Guji smart. Haddii aad si joogto ah uga shaqeyso khadka tooska ah, guji xiriir kasta oo xayeysiis ah oo aad hesho waa caqli-xumo. Ku dheji goobaha aaminka ah waxaadna si weyn u yareyn doontaa halista cudurka.
Orod Ad-Blocker. Ku socodsiinta xayeysiiska ayaa yareyn doonta xayeysiinta aad aragto sidaa darteedna, waxay kaa hor istaageysaa inaad gujiso mid cudurka qaba. Si kastaba ha noqotee, maaddaama barnaamijyadani ay kaliya u adeegaan xayeysiisyo fara-gelin ah, qaar ayaa laga yaabaa inay weli ku siibtaan. Sidoo kale, tiro sii kordheysa oo xayeysiisyo ah ayaa ka hortageysa adeegsiga xayeysiiska inta la isticmaalayo.
Jooji Flash iyo Java. Xaddi aad u tiro badan oo furin ah ayaa loo galiyaa kombiyuutarka ugu dambeeya iyada oo loo marayo fiilooyinkaas. Ka saaristooda ayaa sidoo kale meesha ka saareysa nuglaanta.
Ka ilaalinta barnaamijkaaga dhijitaalka ah xumaanta
Ku rakib qalab antivirus ah. Gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso bogga WordPress ee suuqgeynta, waxaa jira fiilooyin badan oo waaweyn halkaas oo bixin kara kahortagga fayraska kahortaga.
Si taxaddar leh u hubi xayeysiiska martigelinta. Adiga oo adeegsanaya caqliga saliimka ah, way fududaan kartaa in la ogaado haddii xayeysiinta dhinac saddexaad ay waxoogaa hoos u yar yihiin. Ha ka baqin inaad si taxaddar leh u xirto haddii aadan hubin.
Ilaali guddigaaga maamulka. Hadday tahay baraha bulshada, websaydhkaaga ama xitaa emaylkaaga, haddii hacker uu marin ka heli karo mid ka mid ah koontooyinkan, markaa way u fududaan doontaa iyaga inay ku duraan koodh xun. Haysashada ereyada sirta ah ee sirta ah oo aamin ah waa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican ee aad kan kaga hortageyso.
Amniga fog. Waxa kale oo jira khatar weyn oo ah in dambiileyaasha internetka ay marin u helaan koontooyinkaaga iyagoo adeegsanaya shabakadaha WiFi ee amni darrada ah. Adeegsiga Shabakad Gaar loo Leeyahay (VPN) markay baxaan iyo markay socotaba waxay qarin doontaa xogtaada iyadoo la abuurayo xiriir bilow ah oo aamin ah oo u dhexeeya adiga iyo server-ka VPN.
Malvertising waa wax laga xumaado oo ku saabsan dhammaan suuqleyda internetka; mid aan u muuqan inuu meel kasta u socdo goor dhow. In kasta oo aynaan marna ogaan karin waxa mustaqbalku ku saabsan yahay kharribaadda, habka ugu wanaagsan ee aan uga hor mari karno kuwa wax jabsada waa inaan sii wadno inaan la wadaagno sheekooyinkeenna iyo talobixinteena dadka isticmaala internetka.
Haddii aad waayo-aragnimo kala kulantay kharribaad ama waxyaabo kale oo amniga suuqgeynta dijitaalka ah, ka dib hubso inaad ka tagto faallo xagga hoose ah! Fikradahaagu waxay tagi doonaan waddo aad u dheer si ay gacan uga geystaan ​​abuuritaanka mustaqbal aamin ah oo khadka tooska ah loogu talagalay suuqleyda iyo dadka isticmaalaba.
Caroline waa qoraa iyo suuqgeynaya waxyaabaha loogu talagalay Fikradaha Ammaan ah. Ku takhasusay amniga internetka, waxay ka warqabtaa waxyeelada malware ay ku geysan karto ololayaashaaga internetka. Waxay sifiican ubaratay hanjabaadaha khadka tooska ah iyo suurtagalnimada tuugada ay ku afduuban karaan shabakadaha iyo istiraatiijiyadaha dallacsiinta. Markay tahay ruug cadaa ruug cadaa ah, waxay u hamuun qabtaa inay la wadaagto waaya-aragnimadeeda shakhsiyaadka isku fikirka ah si ay internetka uga dhigto meel aamin ah.